कोरोना संक्रमण : के गर्दैछन् बागलुङका स्थानीय सरकार ?::Nepali News Portal from Nepal
कोरोना संक्रमण : के गर्दैछन् बागलुङका स्थानीय सरकार ?
कतिपय स्थानीय तहमा ज्वरोमापन यन्त्र समेत छैन !
बागलुङ, १२ चैत – कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै बागलुङका स्थानीय तह ब्यवस्थापनमा जुटेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले पुर्वाधार निर्माण थालेका छन्भने कतिपयले सामान्य ज्वरो जाँच गर्ने यन्त्रको समेत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । बागलुङ नगरपालिका धौलागिरी अञ्चल अस्पताल, नेपाली सेना र प्रहरीले तयार पारेका पूर्वाधारको भरोसामा छ । स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक पिपिईको व्यवस्थापनमा सक्रियता बढाईएको, प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी र केन्द्रलाई तयार पारिएको नगर कार्यपालिकाले बताउँछ ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गईरहेका बेला जैमिनी नगरपालिकाले कुनै पनि तयारी गरेको छैन । संक्रमित देखापरेमा राख्नुपर्ने क्वारेन्टाइन, बिरामी पुष्टि भएमा चिकित्सकको निगरानीमा राख्नुपर्ने आईसोलेसन लगायतका कुनैपनि पूर्वाधारको तयारी नरहेको नगर कार्यपालिकाले जनाएको छ । जैमिनी नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इश्वरी प्रसाद शर्माले भने ‘शान्ति माविलाई क्वारेटाइन बनाउने भन्ने छ । आवश्यक परे नजिका बिद्यालय प्रयोग हुन्छन् ।’ जानकारीको अभावले तयारी गर्न नसकिएको उनले बताए । सम्बन्धित बिषयका बिज्ञ नगरमा नरहेको र हल्लाका भरमा तयार भएका पूर्वाधारले काम नदिने उनको तर्क छ । ‘हामीसँग ज्वरो नाप्ने सेन्सर थर्ममिटर समेत हामीसँग छैन, खरिदका लागि खोजेको धेरै भयो तर बजारमै पाईंदैन’ उनले भने ‘जो कोहीले उपलब्ध गराए भुक्तानी गर्न तयार छौं ।’
लकडाउनको समयमा बाहिर ननिस्कन, कोरोनाका कारण हुनसक्ने क्षति, लक्षण र साबधानीका उपायको बिषयमा भने प्रचार प्रसार गरेर चेतना फैलाउने काममा लागिएको उनले बताए । जैमिनीमा अत्यावश्यक औषधिको भने अभाव नरहेको र माक्स तथा सुरक्षा सामग्रीको प्रबन्ध भैरहेको उनले दाबी गरे ।
बरेङ गाउँपालिकाले आवश्यक औषधिको तयारी थालेको छ । बिपद व्यवस्थापनको लागि भन्दै दश लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाले सोही रकमले औषधि, माक्स, सेनेटाईजर तथा सुरक्षा सामाग्रीको प्रबन्ध गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले बताए । गाउँपालिकाले बाटाकाचौरमा रहेको जनता प्राबिमा २५ जना अट्न सक्ने क्वारेण्टाईन बनाएको छ । कृषिकर्मबाट नै बरेङका सर्वसाधारणको दैनिकी चल्ने भएकाले पाँच जनाभन्दा धेरै जम्मा भएर खेतबारीको काम समेत नगर्न आग्रह गरिएको थापा बताउँछन् । ‘गाउँमा मल (गाई भैंसीको गोभर) बोक्ने बेला भएको छ’ थापाले भने ‘हुद्धा (समुहमा गरिने काम) लगाउँदा समेत पाँच जनाभन्दा धेरै नहुन भनेका छौं । शहर बजारमा फैलिएको कोरोना त्रासका कारण गाउँ फर्किएका युवाहरुलाई लकडाउनमा सम्हाल्न बरेङलाई धौ–धौ भएको छ । ‘२०÷२५ जना जम्मा भएर पिकनिक खान खसी डो¥याएर हिँडेको देखेपछि रोक्यौं’ उनले भने ‘सुरक्षाकर्मीनै परिचालन गरेर पिकनिक खाने, धेरै जम्मा भएर तास खेल्ने जस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्न लगाएका छौं ।’
यस्तै, बडिगाड गाउँपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा क्वारेन्टाईन निर्माणको तयारी थालेको छभने ताराखोलाले हिल स्वास्थ्य चौकीलाई क्वारेण्टाईन बनाएको छ । ताराखोलाका ५ वडाका स्वास्थ्य संस्थामा कम्तिमा ४ वेडको आईसोलेसन बनाउने तयारी पनि गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्मा बताउँछन् । निसीखोलाले गाउँ कार्यपालिका नजिकै रहेको एक बिद्यालयमा क्वारेण्टाईन बनाउने तयारी थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इश्वरलाल शाक्यले बताए । तमानखोला गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकाले पनि आवश्यक तयारीका लागि छलफल चलाईरहेको जनाएका छन् ।
लकडाउन पूर्व नाकामा हेल्थ डेक्स र १० जनाभन्दा धेरै जम्मा नहुन आग्रह गर्दै आएको गल्कोट नगरपालिकाले आईसोलेसन र क्वारेण्टाईनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ । काठेखोला गाउँपालिकाले ८ वटै वडालाई आईसोलेसनसहित क्वारेण्टाईन व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । वडा नं ४ तंग्राम र ८ लेखानीले स्थानीय विद्यालयमा क्वारेण्टाईन बनाएको जनाएका छन्भने बाँकी वडाले खाली रहेका र बस्तीदेखि टाढा रहेका विद्यालयलाई प्रयोगमा ल्याउने जनाएका छन् । ‘ज्वरो नाप्ने मेसिन त छैन् के क्वारेण्टाईन बनाउनु खै’ वडा नं ७ का अध्यक्ष प्रेमबहादुर जिसीले भने ‘वडाले सक्नेजति सबै तयारी भैरहेकै छन् ।’ गाउँपालिकाले कार्यपालिका नजिकै रहेको भीमशेन माविमा क्वारेन्टाईन निर्माण गर्न सकिने जनाएको छ ।